केन्द्रबिन्दुको राउण्ड टेबलमा कसले के भने ? (भिडियोमा) - Kendrabindu Nepal Online News
केन्द्रबिन्दुको राउण्ड टेबलमा कसले के भने ? (भिडियोमा)
११ भाद्र २०७६, बुधबार २२:०९
काठमाडौं । सवारीसाधनहरुको कूम्भमेला १४ औं नाडा अटो शो भदौ १० गतेदेखि १५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
एक सय ६० वटा स्टल रहेको मेलामा २३ ब्राण्डका चारपांग्रे सवारीसाधन, १९ ब्राण्डका दुई पांग्रे, १२ ब्राण्डका लुब्रिकेन्ट, ९ ब्राण्डका टायर, ५ ब्राण्डका ब्याट्री, १४ पार्टपूर्जा एवं ग्यारेज उपकरण कम्पनी तथा १३ वटा वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् ।
यसै सेरोफेरोमा रहेर केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडियाले सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरुसँग राउण्ड टेबल कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । कार्यक्रममा सडक, यातायात, अटो व्यवसाय, राजस्व अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा विशेष बहस र छलफल भएको थियो । उक्त राउण्ड टेवलमा कसले के भने ? बाँकी भिडियोमाः
14 nada auto show, राउण्ड टेबल
Prevकाभ्रेको पनौतीमा रहेको तेजगंगा क्याम्पसमा ताला
नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन : मूल विषयमा विवाद कायमैNext